Bokin' ny Mpitoriteny - Wikipedia
Bokin' ny Mpitoriteny
(tonga teto avy amin'ny Bokin'ny Kôhelety)
Ny Bokin' ny Mpitoriteny na Bokin' ny Kôhelety na Bokin' ny Eklesiasta dia boky hita ao amin' ny Baiboly ao amin' ny Testamenta Taloha izay miresaka momba ny mahazava-poana ny fiainan' ny olombelona mbamin' ny asa izay ataony raha tsy miaraka amin' ny fatahorana an' Andriamanitra.
Ny ohabolan'i Solomona, nataon'i Gustave Doré, 1866
1 Anaran'ny boky
3 Fizaràn'ny boky
3.1 Efa voafaritra mialoha ka tsy misy fiovana (1.1 -- 2.26)
3.2 Tantely amam-bahona ny fiainan'olombelona (3.1 -- 6.12)
3.3 Ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao (7.1 -- 12.13)
Ny hoe Mpitoriteny dia fandikana amin' ny teny malagasy ny teny grika hoe Εκκλησιαστής / Ekklêsiastês na ny teny hebreo hoe קֹהֶלֶת / Qohelet.
Ny teny grika hoe Εκκλησιαστής dia izay enti-milaza olona manangona na mamory, teny avy amin' ny hoe Εκκλησία / Ekklesia izay midika hoe "fivoriana", "famoriana", "fiangonana" na "fanangonana". Tsy voatery momba ny Fiangonana na Eglizy izany.
Ny teny hebreo hoe Qohelet ao amin'ny Baiboly hebreo kosa dia enti-manondro olona miresaka eo anatrehan' ny vahoaka mivory na olona miresaka amin' ny fiangonana. Avy amin' ny teny hebreo hoe קהל / Qahal izay midika hoe "fivoriana" na "fiangonana" io teny io. Fandikan-teny efa vokatry ny fanaovana heviteny izany ny hoe Mpitoriteny.
Ny Bokin' ny Mpitoriteny dia fikarohana ny antom-pisian' ny olombelona sy izay misy rehetra eto an-tany, sy ny fomba hahazoan' ny olombelona fahafaham-po sy fiadanana, ary ny tena lanjan' ny fiainana. Zava-poana ny miaina tsy miaraka amin' Andriamanitra. Tsy afaka hahalala ny dikan' ny fiainany ny olombelona, dia ity fiainana fohy sady tsy azo antoka ity. Asehon' ny boky fa misy zavatra maro tsara azo raisina sy arahina eo amin' ny fiainana nefa tsy vitsy koa ny zava-dratsy toy ny hadalana. Mamporisika ny olona ny "Mpitoriteny" mba hankamamy ny fiainana nomen' Andriamanitra azy amin' ny alalan' ny fanatanterahana zavatra toy ny asa, ny fisakafoanana, ny fisotroana, ny fisakaizana, ny fanambadiana sy ny hafa koa. Fa ny lehibe indrindra amin'ireo dia ny fanoavana an' Andriamanitra.
Azo zaraina telo ny Bokin' ny Mpitoriteny:
Efa voafaritra mialoha ka tsy misy fiovana (1.1 -- 2.26)
Ahitana ny soa sy ny ratsy ny fiainan' olombelona (3.1 -- 6.12)
Fanomezan' Andriamanitra ny aina (7.1 -- 12.13)
Efa voafaritra mialoha ka tsy misy fiovana (1.1 -- 2.26)Hanova
Teny fampidirana (1.1-2)
Tsy misy zava-baovao ny eto an-tany (1.3-11)
Tsy misy afa-miala amin' izay efa nanendrena azy (1.12--2.6)
Tantely amam-bahona ny fiainan'olombelona (3.1 -- 6.12)Hanova
Manam-potoana ny zava-drehetra (3.1-8)
Tsy azo antoka ka tokony ho entina am-pahendrena ny fiainana (3.9--6.12)
Ankino amin'Andriamanitra ny fiainanao (7.1 -- 12.13)Hanova
Fanomezan' Andriamanitra ny aina (7.1-29)
Tsy misy mahalala ny havoaky ny ampitso (9.1-11.6)
Hajao sy toavy Andriamanitra (11.7--12.7)
Bokin' ny olon-kendry ao amin' ny Baiboly kristiana: Jôba - Salamo - Ohabolana - Mpitoriteny (na Kôhelety) - Tononkiran' i Sôlômôna (Tononkira Fanaperana) - Fahendren' i Salômôna - Ekleziastika (na Siràka).
Boky ao amin'ny Ketuvim ao amin'ny Baiboly hebreo: Salamo - Ohabolana - Jôba - Tononkira Fanaperana - Rota - Fitomaniana - Mpitoriteny - Estera - Daniela - Ezra-Nehemia - Tantara
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Bokin%27_ny_Mpitoriteny&oldid=1041854"
Dernière modification le 19 Desambra 2021, à 02:25
Voaova farany tamin'ny 19 Desambra 2021 amin'ny 02:25 ity pejy ity.